Shiinaha Chamomile-saareyaasha ayaa laga soosaaray iyo Shirkado cusub | Chenlv
Chamomile Warbixiinta ka qayib ubaxyadii geedka chamomile iyada oo loo marayo geedi socodka halsano ah. Faa'iidooyinka caafimaad ee ay ka mid anti-bararka iyo ku dejinaysaa, anti-convulsivant, hagaajinaysaa habka difaaca iyo lallabo. Codsiyada Warbixiinta Chamomile ka mid ah supplements dabiiciga ah, cabitaanka dabiiciga ah brewed iyo khal botanical.
Walaxda Firfircoon: apigenin
Magaca Laatiin: Matricaria chamomilla L.
Part isticmaalo: dhalatada oo dhan
Imaanshaha: budada brown huruud
soosaaray Chamomile waa wax laga soosaaray ah la qalajiyey oo dhan geedo yaryar ee chamomilla Matricaria L., dhirta Compositae ah. Waxaa inta badan ku jira flavonoids, saponins, polysaccharides, saliidaha kacsan iyo waxyaabo kale oo firfircoon. Waxay leedahay saamayn anti-bararka, anti-fangas iyo maroojiska. Waxaa la isticmaalaa sida a qayb qurxiyo dawooyinka iyo waxa ku jira Chamomile. saliidda timaha cadar, kareemada iyo labeen waxaa loo isticmaalaa in Europe in lagu daaweeyo cudurro kala duwan maqaarka.
Previous: Soosaaray Hawthorn
Next: Løvetann xididka laga soosaaray
Soosaaray qaraha qadhaadh
Soosaaray shaaha geedka canabka ah
Eucommia Ulmoides jilif Warbixiinta
Waxyaabaha ay ka kooban Pullulan kaabsoosha , Active Pharmaceutical Ingredients, fiitamiinada geedaha Warbixiinta , Active Pharmaceutical koobnaan cunto Lofexidine , Pharmaceutical firfircoon , Waxyaabaha ay ka kooban Pharma ,